QORMO CILMIYEED- DHAAWACA SHILIN SOOMALIGA IYO DHALIISHEEDA CIDDA QAADANAYSA. - Abdi Mallow
Home » Uncategories » QORMO CILMIYEED- DHAAWACA SHILIN SOOMALIGA IYO DHALIISHEEDA CIDDA QAADANAYSA.
QORMO CILMIYEED- DHAAWACA SHILIN SOOMALIGA IYO DHALIISHEEDA CIDDA QAADANAYSA.
Maqaalkan waxaa qoray inaga oo ah Arday Cabdullaahi Abshir Muuse Sanco ahna arday kamid ah ardayda dhigata kulliyada cilmiga dhaqaalaha ee jaamacadda Puntland State University (PSU), qoraalkani wuxuu si hufan u iftiiminayaa Qeexitaan cilmiyeed ka lacag, Dhaawaca shillinkeena maxaa sababay, maxaa guud ahaan lacag loo daabacaa, yaa leh dhaliisha daabacaada lacagta shilin soomaaliga, maxaase daawo u ah dhaawaca lacagteena.
Dhaqaalayahaniintu Lacag waxay ku qeexeen “ WAXKASTA OO LAGU HESHIIYAY IN WAX LAGU KALA BADASHO AMA DAYN LA ISAGA BAXSHO”
Lacagtu waxay soo martay heerar kala duwan sida lacag badeeco ah (commodity money), lacag cadadi ah (coin), lacag waraaqo ah (Fiat money), lacag jeeg ah, ilaa maanta oo la amrayo lacag elektaroonig ah.
Dadka aan dhaqaalaha baran lacag iyo hanti ayay isku qaldaan. Markay rabaan inay dhahaan qofkaasi waa hantiile waxay ku dhahayaan ninkaas lacag ayuu leeyahay. Laakiin waxaa xaqiiq ah lacag iyo hanti inay aad u kala fogyihiin, maadaama hantidu ay isugu jiri karta guryo, baaabur lacag iyo kabadanba.
4. Maqnaanshaha bangigii dhexe.
5. Faham xumida aan ka qaadnay federaalka.
Dowlad goboleedkasta waxay rabtaa inay nidaamkeeda lacageed iyadu maamulato oo bangigoodu uu noqdo kan lacagta u sameeya, taasna waa dhaawac aan kusii dilayno lacagteenii awalba liidatay. Taas waxaaba kasii daran qeybo ka mid ah dalkeena inay samaysteen lacago gaar ah sida Maamulka Somaliland oo iyaduna ah dhaawac ay adkaanayso dhayitaankiisu.
7. Isu dheeelitirnaan la’aanta dajinta iyo dhoofinta.
8. Lacagta taleefoonka lagu shubto.
Dhibaatooyinka kale oo dhiig baxa kusii badiyay lacagteena waxaa kamid ah lacagahan taleefoonada lagu shubto taas oo gabi ahaanba meesha ka saartay isticmaalka shilinkeenii maadaama lacagtaasi ay tahay lacag ku qiimaysan dollar kana howl fudud isticmaalka cooshka intooda badan bulshadii halkaas ayay u wareegtay o waxaanba noqonay bulsho aan isticmaalin lacagta cadaanka ah (Cashless Society) malahayga mana foga maalinta la inooku yeeri doono bulsho lacag la’aan ah o aysanba jirin lacag ay isticmaalaan.
9. Faragalinta bangiga dunida.
10. Danayn la’aanta madaxdeena.
1. waa midda koowaade waa in ay dhacdo is badal hab lacageed oo ay qasab noqoto in laga guuro lacagtii hore oo la samaysto lacag cusub sida ka dhacday ciiraaq waqtigii madaxweyne Sadam laga riday xilka waxaa la daabacay lacag cusub maadama lacagtii hore uu sawirkiisu ku sawirnaa, sido kale dhacdadaas mid lamid ah waxay ka dhacday wadankeena soomaaliya waqtigii xorriyada markii laga guurayay lacagtii somalo oo la samaynayay lacagta shilinka.
2. Waa midda labaade lacag waxaa loo daabacaa inay caawiso horumarinta dhaqaalaha, haddii wadanka dhaqaale ahaan kobco oo tirsiga dadkiisuna bataan iyadoo aysan xaddiga lacagta wadanku wax iska badalin waxaa imaanaysaa in dalabkii lacagtu uu ka bato lacagtii suuqa ku jirtay taas oo keenaysa suququr lacageed oo ku dhiirgalinaya bangiga dhexe inuu lacag daabaco si dhaqaalaha loogu soo celiyo isu dheelli tirnaantiisii.
3. Waa midda saddexaade waxaa loo daabacaa inay lacagtu sahasho isdhaafisiga badeecadaha iyo adegyada.
4. Waa midda afaraade waxaa loo daabacaa in lacagtu ay wareejiso taayirka ganacsiga iyo dhaqaalaha wadanka.
MAXAY DOWLADA SOOMAALIYA IYO DOWLAD GOBOLEEDYADU HADDA LACAGTA U DAABACAAN?
Laakiin maanta waxaa jirta mid taas ka duwan oo lamaba yaqaano cid masuul ah lacagta la daabacayo maalinkasta waxaana marag u haysta dhaqaalayahan madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo labo jeer oo uu la hadlay baarlamaanka sheegay inuusan aqqon cidda lacagta deegaanada Puntland u daabacday. Malahayga madaxweyne xasana wa la mid oo ma yaqaan cidda lacagtaan daabacday isagu wuxuuba dheeryahay kan hore wuxuu xayaysiiyaa dadyowga kale lacagahooda oo waqti ayuuba iskusoo sawiray isagoo reero kale toodood xayaysiinaya.
1. Bangi dhexe oo hufan oo heshiis lagu yahay.
2. Joojinta qaadka.
3. Dib u eegidda federaalka.
Anoo ixtiraamaya dastuurka dalkayga ma rabo inaan duro laakiin waxaan talo kusoo jeedin In u eegid lagu sameeyo awoodaha dowlad goboleedyada oo bal aan meesha ka saarno in qolo walba ay lacag iska daabacan karto iyo in la cadeeyo shaqada dowlad goboleedyada iyo tan dowladda dhexe.
4. Kor u qaadidda waxsoosaarka.
6. Samaynta xeer xakamaynaya lacagaha taleefoonada.
7. La xisaabtanka madaxda.
8. Samaynta miisaaniyada haboon.
Waxaa qorey qoraal cilmiyeedkaan:
Arday Cabdullaahi Abshir Muuse Sanco
Wixii talo iyo tusaale ah oo aad ii hayso fadlan halkan iigu soo dir
Facebook: Cabdullaahi Abshir Muuse Sanco.
Qoraalkan xuquudiisa waxaa iska leh Abdullahi Sanco
Haddii aad doonaysid in qormo kuu soo daabaco kusoo hagaaji
QORMO CILMIYEED- DHAAWACA SHILIN SOOMALIGA IYO DHA...
Daawo: Donald Trump oo u dayriyey Somalida Marayka...
Corruption in Puntland and Adde Muse’s Noble-Sound...